Maitiro ekuisa makoma nenzira kwayo, inoshanda uye yakapusa gwara | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Literature, dzakawanda
Comma inoponesa hupenyu
Maitiro ekuisa makoma nenzira kwayo akakosha kuti ugone kunyora (uye kuverenga) kunyora nemazvo. Pasina ivo, kuverengerwa kwemavara kwaizove kwakatsetseka uye, nekudaro, kushaya chero mutinhimira kana pfungwa yekushongedza inoita kuti vanzwisise. Mutemo wakatemwa wekushandisa kwawo unotevera: koma inofanira kunyorwa nekukasira mushure mekutanga kweshoko kana chiratidzo.
Ipapo, nzvimbo inofanirwa kusiiwa pakati pekoma neshoko, kusaina kana nhamba inoenderera zvirimo. Kunyanya, makoma anoshandiswa kuratidza kumbomira zvishoma pakunyora. Iwo mabhureki mapfupi pakati pekuverenga haana kureba pane ayo anoratidzwa nenguva (.).
1 Zvimwe zvinhu zvekufunga nezve makoma
2 Maitiro ekuisa makoma nemazvo mune zvinyorwa
2.1 Idya uine basa rekuita
2.2 Iko kurongeka kwekushandisa iyo enumerative comma
2.3 Kushandiswa kwakakodzera kweiyo inotsanangudza kana comma comma
2.4 Iko kurongeka kwekushandisa iyo elliptical comma
2.5 Iko kurongeka kwekushandisa kweasina kujeka koma
2.6 Kushandiswa kwakarurama kwekoma yekubatana
2.7 Kushandiswa kwakakodzera kwehyperbatic coma
3 Kumwe kushandiswa kwekoma
3.1 Sekuparadzanisa decimal
3.2 Mumitauro yekuronga
Zvimwe zvinhu zvekufunga nezve makoma
Coma ine "simba" rekuchinja zvachose zvinoreva chirevokunyangwe zvichiratidza kuteedzana kwemazwi. Muenzaniso unowanzoitika unoitika nezvipikisheni uye nenzira yaungashandure boka rezvidzidzo kuita rizere. Semuyenzaniso:
Vadzidzi vanoshingaira vakapedza maitiro eerobic.
Vadzidzi vanoshingairira vakapedza kurovedza muviri.
Mutsara wekutanga, vadzidzi vese vakapedza kurovedza muviri uye vese vaifarira. Muchirevo chechipiri, chete avo vaifarira vakapedza kurovedza. Mumwe muenzaniso wekare "iyo comma inoponesa hupenyu", sekuonekwa pazasi:
Uyai mudye, vana.
Uyai kuzodya manje, vana.
Maitiro ekuisa makoma nemazvo mune zvinyorwa
Mumienzaniso miviri yapfuura - zviri pachena - iyo nzira chaiyo yekunyora mutongo ndowechipiri. (Kunze kwekunge iri yehutsinye kuraira kana ndima kubva kune inotyisa nyaya). Neichi chikonzero, kana munhu achinyora rugwaro, vanofanirwa kuve vakajeka nezve mhando dzemakoma kuti vadziise munzvimbo inoenderana nechinangwa chavo.
Idya uine basa rekuita
Comma uye vocative.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti izwi iri inzira yekunongedza kana kutaura kune mumwe kana vanhu vazhinji nemazita kana nerimwe izwi rakasarudzika. Ipapo, komma yakashandiswa nemazvo inoratidzira kutaura kwechirevo (zvisinei nekwairi mune chidzidzo-chiito-chirevo chekuteedzana). Semuenzaniso:
Mario, buruka kuchiteshi chepasi pevhu na9 o'clock.
Vakapedza chikoro chesekondari, zvese kwavanoisa zvinofanirwa kuverengerwa.
Yasvika nguva yemasikati, Carolina, geza maoko nesipo nemvura.
Nilsa, mukadzi anoda kuverenga Neruda.
Frida, yakareba, wakura sei!
Vateereri vanodiwa, muimbi asvika, garai muzvigaro zvenyu.
Iko kurongeka kwekushandisa iyo enumerative comma
Iyo comoma yekuverengera ndiyo inoshandiswa kupatsanura yega yega yenhengo dzeboka rezvinhu zvine zvakafanana maficha kana hunhu. Rudzi rwe comma urwu runobatsirawo mukuteedzana uye, kazhinji, mazwi aya anoperekedzwa nezvibatanidzo (izvo zvisina komma pamberi pavo). Semuyenzaniso:
Mai Carmen vanotengesa shangu, shangu, mabhegi, zvinonhuwira uye zvigadzirwa zvehutsanana muchitoro chake. (Ndizvozvo).
Mai Carmen vanotengesa shangu, shangu, zvikwama, zvinonhuwira, uye zvigadzirwa zvehutsanana muchitoro chake. (Hazvina kunaka).
Basketball, nhabvu, uye kushambira mitambo inonetsa kwazvo. (Ndizvozvo).
Basketball, nhabvu, uye kushambira mitambo inonetsa kwazvo. (Hazvina kunaka).
Mabhuku emunyori iyeye anonakidza, ane simba, uye azere nezvishamiso.
Ndinoda kuenda kunyika nekuti ndinogona kufema mweya wakachena, kunzwa huswa, kunzwa shiri dzichiimba, uye kurara pasina ruzha rweguta hombe.
Kushandiswa kwakakodzera kweiyo inotsanangudza kana comma comma
Kana comma inowoneka ichishandiswa, mutongo unofanirwa kuve wakagadzirwa nemakoma pakutanga nekupera. Mhando yekoma iyi inoshandiswa kuwedzera rumwe ruzivo — kwete kukosha, nokudaro, inogona kubviswa pasina dambudziko- nezvemunhu kana chinhu chakatsanangurwa (chidzidzo) kana chiito (chiito). Kunyangwe, pasina nguva iyo iyo yekuwedzera data inogona kugadzirisa zvinoreva chirevo.
López, kunze kwekuve mutambi ane mukurumbira, mutambi akanaka kwazvo. (Inogona kunyorwa: López mutambi akanaka kwazvo).
Mariana naEduardo vakasvika, kunyange hazvo kwaitonhora, mangwanani kuhofisi. (Inogona kunyorwa: Mariana naEduardo vakakurumidza kusvika kuhofisi).
Foni yangu, kunyangwe isiri iyo yazvino chizvarwa, inotora yakanakisa dudziro mafoto. .
Iko kurongeka kwekushandisa iyo elliptical comma
Iko kushandiswa chaiko kwerudzi urwu rekoma senge chinotsiva izwi rakambotaurwa uye / kana zita. Neichi chikonzero, iyo elliptical comma inoshandiswa seyakakodzera sosi yekudzivirira kutadza kwekudzikisira uye simbisa manyorerwo. Semuyenzaniso:
Marcos akafukidza nguva yemangwanani uye Aureliano, iyo yekuchinja kwehusiku. (Iyo comma mushure me "Aureliano" inotsiva chikamu "chakafukidza mukana").
Roberta akatenga kamera; Mario, mamwe magirazi. (Iyo comma mushure me "Mario" inotsiva "yatengwa").
Manuel aitsvaga runyararo; Ignacio, kunakidzwa. (Iyo koma mushure me "Peter" inotsiva "kutsvaga").
Iko kurongeka kwekushandisa kweasina kujeka koma
Mhando yekoma iyi inoshandiswa kana nyaya yacho ichizivikanwa nerimwe zita kana mamwe mazita. Iri zita rekunyepedzera rinofanirwa kuvharirwa mumakoma. Semuyenzaniso:
Giannis, chiitiko chechiGreek, akahwina iyo NBA Inonyanya Kukosha Player mubairo we2020.
Nubia, iyo programmer, inoshanda kwazvo pakubvisa kuburitsa pane network.
Antonio Rubiales, munyori, akatsoropodza nehasha mutungamiri wekirabhu yekuverenga.
Kushandiswa kwakarurama kwekoma yekubatana
Iyo comma yekubatanidza inodikanwa kana mumutsara pane kumbomira nechimwe chirevo chemashoko kana zvirevo. Nzira chaiyo yekuisa iri mushure mekubatana kuri mumutsara. Mataurirwo anowanzoitwa mune izvi zviitiko anotevera:
Mimwe mienzaniso inogona kuonekwa pazasi:
Vhiki rapfuura ndakapedza iyo nzira yese, zvisinei yaive yakaoma zvikuru.
Mangwana mabhanhire akanakisa acharidza, ndiko kuti, vanhu vazhinji vachauya.
MuBasketball iwe unofanirwa kudzidzira kutangisa kutanga.
Kushandiswa kwakakodzera kwehyperbatic coma
Mune ino kesi, komma inofanira kuiswa mushure mechiitiko kana chiitiko. Zvakanaka, iyo hyperbatic comma inoshandiswa kugadzirisa iyo yakajairika marongero ezvinhu zvemutsara (kuteedzana, chirevo, chiito uye chirevo). Saizvozvo, zvinoshanda kusimbisa chiito mukati meimwe mamiriro ezvinhu. Semuenzaniso: - Zvinoenderana nemitemo yekambani yedu, José anokodzera kucherechedzwa nemunhu wese.
Kunyangwe kushomeka kwemari, chirongwa ichi chakaitwa zvinobudirira.
Tichiri kumashure, isu tinofanirwa kuramba takaisa pfungwa pachinangwa chedu.
Kumwe kushandiswa kwekoma
Mune masvomhu, ese madesimali kukosha anotungamirwa nekoma. Naizvozvo, zvinoshanda kusiyanisa manhamba akazara kubva kunhamba dzenhamba. Kune rimwe divi, mune dzimwe nyika nguva yacho inoshandiswa nechinangwa ichi panzvimbo yekoma. (Makoma ese uye nguva yacho inoshanda kune RAE).
Iyo comma mukomputa inoshandiswa kune akasiyana madhivhosi. Zvisinei, inenge inogara ichishandiswa kupatsanura hunhu kana kuratidza mitsara yechimwe kana zvimwe zvinoshanduka. Nenzira imwecheteyo, inoshanda kuratidza izvo zvinhu zvefomula kana kuraira.
[Pa (a, b)] (basa).
[int a, b, sum] (kuzivisa kwemisiyano).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Maitiro ekuisa makoma nenzira kwayo
Luis Felipe Ortiz-Reyes akadaro
Zvinonakidza kwazvo kuwana ruzivo sezvariri, zvinogara zvichibatsira kugadzirisa kukanganisa kana kunyora ruzivo.
Henry Nava akadaro
Rakanakisa ruzivo, ndatenda.
Pindura Enrique Nava